RESPIRATORY PROTECTION | Kyee Shwe & Sister | KS&S Myanmar
Respiratory protective equipment can protect against touching hazardous items and breathing in fumes, dust and other hazardous particles, and air pollutants and maintain the health of the respiratory system,
Respiratory protective equipment must be used because chemical products and fumes are are actually toxic and they can cause cancer, lung failure, other diseases (or) even death,
It is especially need to make correct choices in choosing suitable and good quality protective equipment for your work condition. Besides tasks should be carried out systematically to train the staff on using the protective equipment correctly and cleaningamaintaining it.
အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများသည် အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ရခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အငွေ့များ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အမှုန်များ၊ လေထုထဲရှိ အညစ်အကြေးများအား ရှုရှိုက်မိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်ရှုှုလမ်းကြောင်း၏ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ငွေ့မျာသည် အမှန်တကယ် အဆိပ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ကင်ဆာ အဆုတ်ချို့ယွင်းမှု၊ အခြားရောဂါများ (သို့) အသက်သေစေနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို မဖြစ်မနေအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
မိမိလုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်ပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့် အကာအကွယ် ပစ္စည်းများအား မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်အသုံးပြုရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အသုံးပြုမည့် ဝန်ထမ်းများအား အသုံးပြုပုံ မှန်ကန်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ၏ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများကိုလည်း စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။